ငွေရေးကြေးရေး | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
ငွေရေးကြေးရေး	မေးခွန်းအားလုံးကို မြင်တွေ့စေရန် ညာဖက်အစွန်ရှိ (Calculate ဘေးမှ တြိဂံ)ခလုပ်ကို နှိပ်ပါ။ မေးခွန်းများ Drop Down ကျလာမည်။
ငွေစုငွေပုံ ဝင်ကိန်းရှိရဲ့လား။ ဒီနှစ်ထဲမှာ ငွေရေးကြေးရေး ကံကောင်းမလား။ ရှေ့လာမဲ့နှစ်မှာရော ငွေရေးကြေးရေး ကံကောင်းမလား။
ဝင်ငွေ (လစာ) ဘယ်တော့ တိုးတက်မလဲ။ သူ့ကို ငွေချေးငှါးရင် သင့်ပါ့မလား။ ဒီလုပ်ငန်းမှာ ငွေအပ်ရင် စိတ်ချရပါ့မလား။ သူ့ဆီက ငွေချေးယူချင်ရင် အဆင်ပြေပြေနဲ့ ရနိုင်ပါ့မလား။ ဘဏ်ကနေ ငွေချေးယူလို့ ရနိုင်ပါ့မလား။ ဒီနှစ်ထဲမှာ ငွေကြေးပြဿနာဝင်ကိန်း ရှိသလား။ ချေးငွေကို အချိန်မီ ပြန်ဆပ်နိုင်ပါ့မလား။ ငွေလိမ်ခံရကိန်းရှိသလား။ မြုတ်နေတဲ့ငွေတွေ ပြန်ပေါ်ပါဦးမလား။
<br /> 47 comments on “ငွေရေးကြေးရေး”	shinebobo on August 23, 2010 at 8:57 pm said:
nann myat thiri khing on August 28, 2010 at 8:38 am said:
sakawarhlaing on August 29, 2010 at 7:50 pm said:
သနပ်ခါး on August 31, 2010 at 8:00 pm said:
nilar on August 31, 2010 at 11:45 pm said:
want to know answer
nawphoomu on September 7, 2010 at 4:43 pm said:
ိ်ငွေေ၇းကြေးေ၇းအဆင်ပြေပါမလာ၊ 17.9.1972 တနင်္ဂနွေ သမီး
Aung Lwin on September 16, 2010 at 5:21 pm said:
Excuse me, please kindly reply email to me .
Question : Htee Pauk Kain shi/mashi ?
သစ်ခွမယ် on September 22, 2010 at 3:08 pm said:
ဟုတ်ကဲ့ရှင် ကျွန်မ ကလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
khammo on September 27, 2010 at 6:31 pm said:
ဖိုးထောင် on October 4, 2010 at 12:25 am said:
သိပ်ကောင်းတဲ့ ပရိုကရမ် လေးပါပဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Nandar Aung on October 12, 2010 at 1:41 pm said:
ဒီနေ့ အကို့ Blog ထဲကို ပထမဆုံး လာလည်ခဲ့ပါတယ် သိချင်တဲ့မေးခွန်3းခုကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့မေးခဲ့တယ်………
yethattun on November 23, 2010 at 5:34 pm said:
အေးမြတ်သူ on December 25, 2010 at 5:11 pm said:
Thank you Saya, this is very useful section, whenever I have problems I used this fortune telling method. For me, very correct. Thanks again.
Khin Hnin Swe on January 7, 2011 at 2:06 pm said:
သင်းသင်းကြည် on May 2, 2011 at 2:12 pm said:
၁ စီးပွားရေး အဆင်ပြေ/မပြေ
ှSanDar Tun on June 7, 2011 at 3:07 pm said:
THU REIN mmu on June 17, 2011 at 7:54 pm said:
ုဖြိုးကိုကိုအောင် on July 1, 2011 at 10:17 am said:
အညှော် on July 24, 2011 at 10:53 am said:
saw on August 5, 2011 at 9:19 am said:
ဆရာ ခုလျှောက်ထားတဲ့ အလုပ်ရမှာလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေး မတွေ့ တော့ဘူးနော်။
moekyawthu on August 27, 2011 at 10:56 pm said:
မေးချင်တာကို ဘယ်လို မေးရမှာလဲ ဆရာ
one.nainglu on August 29, 2011 at 2:43 pm said:
min htet kyaw on August 29, 2011 at 7:46 pm said:
အကို ရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
teza on September 21, 2011 at 5:05 pm said:
calculate နှိပ်တိုင်း အဖြေတမျိုးထွက်နေရင်တော့ အဲဒီဗေဒင်ကို မယုံတော့ဘူး
aeo on October 17, 2011 at 11:33 pm said:
quite true susu on October 19, 2011 at 1:57 pm said:
ဆရာ သမီးမွေးနေ့က 26.9.1980 သောကြာ မနက် 53း0. ဟူးရားဂဏာန်း 99 ပါ။
သမီး အောင်ဘာလေထီဆုကြီး ပေါက်ပြီးချမ်းသာမှာလား။ ဘယ်တော့လောက်ကျရင် ပေါက်နိုင်မလဲ သိချင်လို့ပါ။
Kyi Pyar on October 25, 2011 at 3:42 pm said:
ချောစု on November 2, 2011 at 10:10 am said:
ဆရာ ကျမကဗေဒင်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးယုံ ပါတယ်။ ခု ဆရာ webside မှာ ဘယ်လိုမေးရမလဲမသိလို့ လမ်းညွန်ပေးစေချင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်လျက်
အိခိုင်ဖြိုး on November 29, 2011 at 9:07 am said:
ရွှေရည်ဝင်း on December 14, 2011 at 2:02 pm said:
aungthuralinn on January 5, 2012 at 10:56 pm said:
myintmyat on January 10, 2012 at 3:39 pm said:
waiyan on January 30, 2012 at 3:12 am said:
aung on March 17, 2012 at 11:31 pm said:
aung phyo on May 10, 2012 at 8:52 pm said:
ဒီနှစ်ထဲ အိမ်ထောင်ကျ ကိန်းရှိလား
aung phyo on May 10, 2012 at 8:53 pm said:
ဒီနှစ်ထဲ အိမ်ထောင်ကျ ကိန်းရှိလားဟူးရားဂဏန်း78 ပါ
aung phyo on May 10, 2012 at 9:00 pm said:
ဟူးရား ဂဏန်း၆၅ပါ အိမ်ထောင်ကျ ကိန်းရှိလား ဒီနှစ် အတွင်း။
စိုင်းလင်း on June 8, 2012 at 11:17 pm said:
မေသက်ဇင် on December 31, 2012 at 11:37 am said:
2.12.1988 ၊ သောကြာသမီး
ဆရာ အခုလာမဲနှစ်မှာ ထီပေါက်ကိန်း ရှိလားကြည့်ပေးပါဆရာ
Dr.Tin Bo Bo on January 1, 2013 at 10:18 am said:
ထီပေါက်ကိန်း မရှိသေးပါ။ ရှေ့နှစ်မှာ မျှော်လင့်ကြည့်ပါ။
အေးစန်း on January 6, 2013 at 9:47 am said:
8.1.1989 ၊ တနင်္ဂနွေသမီး
ဆရာ သမီး ဒီနှစ်ထဲမှာ ထီပေါက်ကိန်း ၊ ငွေများများဝင်ကိန်းရှိလား ကြည့်ပေးပါ ဆရာ
အေးအေးစန်း on February 5, 2013 at 10:00 am said:
Dr.Tin Bo Bo on February 7, 2013 at 8:42 am said:
ငွေဝင်ကိန်း ၊ ထီပေါက်ကိန်း ၆၇% လောက်ရှိတယ်။ အောင်ဘာလေထီ မှန်မှန်ထိုးပေးပေါ့။ (၇)(၀)(၃)(၅) ဂဏန်းတွေ ပါအောင်ထိုး။ ရှေ့ပိတ် နောက်ပိတ် (၇)(၀)(၅) ရှာထိုးကြည့်။ ကံကောင်းရင် ပေါက်လိမ့်မယ်။
arkheral on February 7, 2013 at 9:27 pm said:
nyinyi on February 12, 2013 at 7:47 pm said:
Thanks you very much…………..teach
Mon on April 14, 2013 at 10:31 am said:
most of the times are right and used many days of your block.
naylinhtet on May 12, 2013 at 7:42 pm said:
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (60,617)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (49,344)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,198)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (32,015)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (24,045)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (15,357)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (13,183)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,696)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,734)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,394)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,353)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (10,191)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (10,149)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,132)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,454)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,398)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (9,019)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,904)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,743)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,742)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,288)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,892)# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (7,772)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,740)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,607)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,555)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,349)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (7,148)# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,083)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (7,036)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !
6 Users Online	Link1 | Link2 | Link3Copyright © 2013. Compu BayDaThuKhuMa. Designed by CompuBayDaThuKhuMa.